Shir Balaadhan Oo Lagu Taageerayay Isbadalkii Iyo Shirwaynihii 8aad Ee XDSHSI Oo Kadhacay Magaalada Helsinka Ee Wadanka Finland. - Cakaara News
Shir Balaadhan Oo Lagu Taageerayay Isbadalkii Iyo Shirwaynihii 8aad Ee XDSHSI Oo Kadhacay Magaalada Helsinka Ee Wadanka Finland.
Helsinka-Finland(CN) Axad.19.Oct.2014, Kaqayb qaadashada iyo taageerada hawlaha horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban ee Qurbajoogta u dhalatay DDSI markasta lagarab taaganyihiin deegaanka ayaan lasoo koobi karin. Jaaliyadaha dalalka qurbaha ee u dhashay DDSI ayaa todobaadkan shirar iyo kulamo balaadhan ku qabanayay dalalka ay joogaan kuwaas oo lagu taageerayay shirwaynihii xisbiga ee dhawaanta kadhacay xarunta gobolka Nogob ee Fiiq.
Shir balaadhan oo ay si qurux badan u soo agaasimeen ururka haweenka (Sugar) iyo ururka SEDYO ee Wadanka Finland oo lagu taageerayay horumarka deegaanka iyo shirwaynihii 8aad ee xisbiga ayaa xalayto kadhacay magaala madaxda Helsinka ee wadankaasi Finland. Waxaana kasoo qayb galay qaybihii kala duwanaa ee ururada, salaadiinta, wax garadka iyo bulshawayn kaloo fara badan.
Ururka haweenka iyo ururka dhalinyarada SEDYO ee wadankaasi Finland oo ah ururo aad u firfircoon islamarkaana garab taagan hawlaha horumarka DDSI oo guulo kasoo hoyiyay ayaa xalayto munaasibadan quruxda badan ku taageerayay horumarka deegaanka gaar ahaan go'aamadii kasoo baxay shirwaynihii 8aad ee xisbiga ee kadhacay magaalada Fiiq.
Waxaa shirka si waafi ah u daadihinayay afhayeenka SEDYO mudane Maxamed Amiin Dhaqane, Waxaana shirka kahadlay gudoomiyaha ururka haweenka marwo Aniisa Maxamed Deeq oo ku nuuxnuuxsatay horumarka deegaanku gaadhay una hanbalyaysay xisbiga.
Sidoo kale waxaa isna kahadlay gudoomiyaha SEDYO Finland mudane Yusuf Axmed oo u hanbalyeeyay xukuumada DDSI ee uu hormuudka kayahay mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo bulshawaynta deegaanka soomaalida Itoobiya wuxuuna ku dheeraaday horumarka uu deegaanku ku talaabsaday. Waxaa kaloo uu u hanbalyeeyay capinetka cusub ee DDSI.
Intaa kadib ayaa waxaa iyaguna kahadley shirka una hanbalyeeyay dhamaan kasoqaybgalayashii shirka kasoo qaybgalay sida saladiinta, culimada iyo waxgaradka. Waxaana wacdi qiimo badan kasoo jeediyey xafidullaah Sheekh AxmedNuur Xuseen. Waxaana hadalo taageero ah oo xisbiga iyo hogaaminta xukuumada dhiiri galinaya laga soo jeediyay goobtii shirka.
Dhanka kale waxaa khadka taleefanka kala qayb qaatay munaasibadan Finland Madaxa Xarunta Dhexe ee XDSHSI lehna awood madaxwayne kuxigeen mudane C/casiis Maxamed Cabdi oo uga mahad celiyay islamarkaana uga waramay jihooyina xisbiga isagoo ugu danbayntiina kula dardaarmay in ay qurbajoogta DDSI u dhalatay ay sii xoojiyaan dadaalkooda wadankoodana ay soo maalgashadaan.
Ugu danbayn shirka Finlad ee lagu taageerayay XDSHSI iyo isbadalkiisa ayaa ku dhamaaday jawi aad u qurux badan.